जन्ती गएका जानु पर्‍यो मलामी ! बिदाईमा रुँदा रुँदै बेहुलीको कसरी भयो मृत्यु ? – List Khabar
Home / समाचार / जन्ती गएका जानु पर्‍यो मलामी ! बिदाईमा रुँदा रुँदै बेहुलीको कसरी भयो मृत्यु ?
जन्ती गएका जानु पर्‍यो मलामी ! बिदाईमा रुँदा रुँदै बेहुलीको कसरी भयो मृत्यु ?
admin July 19, 2021 समाचार Leaveacomment 45 Views
केही परम्परागत मान्यताका कारण नेपाल लगायत केही देशमा विवाहको दिनमा अन्माउने समयमा बेहुली रुने परम्परा सदियौ देखि चलिआएको छ । हिन्दू परम्परा अनुसार विषेशगरी दुलही वा छोरीलाई विदाई गर्ने क्रममा रु वा बा सी हुने गर्छ । छोरीलाई पराइघर पठाउने बेलामा माइती पक्ष धुरु धुरु रुने अझै पनि चलन छ ।
तर, भारतको ओडिसामा भने रुने मात्र होइन विवाहको दिनमा बेहुलीको रुदाँ रुदै मृत्यु समेत भएको छ । भारतीय समाचार अनुसार यो घटना ओडिसाको सोनपुरको हो । मुरली साहुको छोरीको बलांगीर जिल्लाको टेटलगांव निवासी बिसीकेसनको साथमा विवाह भइरहेको थियो । विवाहको सम्पुर्ण कार्यक्रम हुँदै गएर विदाईको समय भएको थियो ।
दुलही लगातार रोहिरहेकी थिइन् । धेरै रुदाँ रुदाँ बेहुली बे हो स भएर भुईमा ल डि न् । आफन्त कोहीले पानी छम्किन थाले त कसैले मालिस गर्न थाले । तर उनी ब्युझिनन् । त्यति गर्दा पनि नभएर उनलाई स्वास्थ्य चौकी लगियो तैपनि उनलाई डाक्टरले बचाउन सकेनन् ।
डाक्टरले युवतीको मृत्यु हर्ट अ ट्या क बाट भएको बताएका छन् । प्रहरीले पोष्ट मार्टम गरेपछि युवतीको शव परिवारलाई बुझाएको छ । बेहुलीको निधन पछि वरपरका गाउँ सबै शो कमा डु बे का छन् । प्रतीकात्मक तस्वीर
Previous निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि श्रावण महिनादेखि आय‍ो यस्तो खुशीको खबर
Next सोमबार भगवान शिवको पूजा गर्नुहुन्छ ? जप्नुस् यी मन्त्र (पूजा विधिसहित)